Ndilifumana njani inqaku kwi-OneNote? - Onenote
Eyona > Onenote > Amanqaku e-Onenote anyamalala-isisombululo esisebenzayo
Amanqaku e-Onenote anyamalala-isisombululo esisebenzayo
Ndilifumana njani inqaku kwi-OneNote?
Intloko ngaphayaOneNotekwiwebhu kwaye ungene kwiakhawunti yakho ukuqalaukubuyisela amanqaku. Emva koko, cofa Jonga>Amanqaku acinyiweyoukhetho lokujonga eyakhoamanqaku alahlekileyo. Cofa ekunene kwiPhawulaukuba ufunauchachakwaye ukhethe 'Buyisela. ” Khetha incwadana yakho yokubhala ukongeza okuPhawulaungene kwaye ucofe u 'Kulungile'
Mholweni. NdinguMax Dalton, kwaye kweli nqaku ndiza kuchaza indlela yokusebenzisa ukhuselo lwegama eligqithisiweyo kwi-Microsoft OneNote app. IMicrosoft OneNote sisixhobo esinamandla sokuthatha inqaku kunye nokulungiselela esiyinxalenye yecandelo leMicrosoft Office lemveliso.
IOS luguqulelo lwesicelo esikhutshwe nguMicrosoft sibandakanya uninzi lweempawu eziphambili zenguqulo yedesktop yesicelo kwaye simahla sisebenzisa. Awufuni wonke umntu owabelana naye abone yonke into. Yiyo loo nto kubalulekile ukuba uqonde indlela yokukhusela iphasiwedi kumacandelo akho eencwadana kunye nendlela yokutshintsha kunye nokususa ukukhuselwa kwephasiwedi ngokunjalo.
Eli nqaku liza kukuhamba kuyo yonke imiba yokusebenzisa ukhuselo lwegama eligqithisiweyo kwi-Microsoft OneNote app. Ungalikhusela njani iphasiwedi kwicandelo. Inyathelo 1.
Zulazula ungene kwincwadi yokubhalela kwi-app yakho ye-OneNote ye-iOS enecandelo onokulihlela ngePhasiwedi Khusela iNyathelo 2 Cofa ku 'Hlela' kwikona ephezulu ngasekunene. Ikhonkco lesikrini.
Izangqa ezingafakwanga umnyama ziyavela phakathi kwamacandelo anemibala kwicala lasekhohlo lesikrini kunye negama lecandelo kwicala lasekunene lesikrini. Inyathelo 3. Cofa isangqa ngasekhohlo kwecandelo ongathanda ukhuseleko lwephasiwedi ukuba longezwe ukuze isangqa ngoku sigcwaliswe ngomthunzi omfusa kunye nophawu olumhlophe lokujonga.
Inyathelo 4. Cofa iqhosha lokutshixa kuluhlu lwe icon ezantsi kwesikrini. Inyathelo 5.
Khetha 'Khusela eli Candelo'. kwimenyu ebonakalayo. Iphasiwedi yokukhusela ikhusi ibonakala.
Inyathelo 6. Faka igama eligqithisiweyo ofuna ukulisebenzisa kwicandelo lePassword, emva koko ufake igama elifanayo kwakhona Qinisekisa indawo. Inyathelo 7.
Thepha ugqibile. Ifestile yokongeza igama lokugqithisa. Ibha yenkqubela phambili iya kuvela embindini wesikrini, ibonisa imeko yesicelo sokukhusela ipaswedi kwicandelo olisebenzisileyo.
Emva kokuba iwindow yokongeza igama eligqithisiweyo inyamalala, uya kusiwa kwiscreen esibonisa imixholo yencwadana leyo, eli candelo alizukutshixwa kuwe de uvale uphinde uvule usetyenziso kwakhona. Nabani na owabelana naye kwindawo yenqaku elitshixiweyo kufuneka ufake iphasiwedi ngaphambi kokuba bajonge imixholo yeendawo ezitshixiweyo. Uyifaka njani ipassword yommandla wobukumkani.
Inyathelo 1. Zulazula uye kummandla okwinqanaba elithile leNcwadi onqwenela ukufikelela kulo. Ukuba eli candelo likhuselwe ngegama eligqithisiweyo, i icon yokukhiya iya kuvela ngasekunene kwelo candelo.
Inyathelo 2. Cofa igama lecandelo. Isikrini sokuvula icandelo liyaboniswa.
Inyathelo 3. Faka iphasiwedi yecandelo elithile kumhlaba wegama eligqithisiweyo uze ucofe u 'Vula' kwikona ephezulu ngasekunene. Ukuba iphasiwedi ichanekile, uya kubuyiselwa kwicandelo ozame ukulivula kwaye umxholo okwelo candelo ngoku uya kufikeleleka.
Ungayitshintsha njani iphasiwedi yecandelo Inyathelo 1. Jonga kwi-notebook kwi-app yakho ye-OneNote iOS enecandelo elitshixiweyo apho ufuna ukutshintsha khona ipassword. Inyathelo 2.
Kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini, cofa u-Hlela. - Izangqa ezimnyama ziyavela phakathi kwamacandelo emibala emibala kwicala lasekhohlo lesikrini kunye negama lecandelo kwicala lasekunene lesikrini. Inyathelo 3.
Thepha isangqa ngasekhohlo kwecandelo ofuna ukutshintsha iphasiwedi ukuze isangqa sifakwe umbala omfusa kwaye sinophawu olumhlophe lokujonga. Inyathelo 4. Cofa iqhosha lokutshixa kuluhlu lwe icon ezantsi kweScreen Inyathelo 5.
Khetha 'Guqula iphasiwedi' kwimenyu ebonakalayo. Isikrini esithi 'Guqula iphasiwedi' siyaboniswa. Inyathelo 6A Guqula iphasiwedi Iwindow ivela embindini wesikrini ebonisa imeko yotshintsho kwicandelo lokhuselo lwegama elikwi-notebook.
Emva kokuba iphasiwedi itshintshiwe, uya kusiwa kwiscreen sasekhaya kuloo notebook. Ngexesha elizayo xa uzama ukufikelela kwicandelo kule notebook, kuya kufuneka ufake ipassword entsha ukuze uyijonge. Ungalususa njani ukhuselo lwegama eligqithisiweyo kwicandelo.
Inyathelo 1. Zulalela kwi-notebook kwi-app yakho ye-OneNote iOS enecandelo apho ufuna ukususa ipassword yakho. Inyathelo 2.
ikhowudi yempazamo 80240031
Thepha 'Hlela' kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini. Izangqa ezingafakwanga umbala ziya kuvela phakathi kwamacandelo anemibala kwicala lasekhohlo lesikrini kunye negama lecandelo kwicala lasekunene lesikrini. Inyathelo 3.
Thepha isangqa ngasekhohlo kwecandelo ofuna ukulisusa igama eligqithisiweyo, ke ngoku isangqa sele sifakwe umbala omfusa kunye nophawu olumhlophe lokujonga. Inyathelo 4. Cofa iqhosha lokutshixa kuluhlu lwe icon ezantsi kwesikrini.
Inyathelo 5. Khetha 'Susa iphasiwedi'. kwimenyu ebonisiweyo.
Isikrini esigqithisiweyo sePassword siyaboniswa. Inyathelo 6. Faka iphasiwedi enxulumene neli candelo kumhlaba wegama eligqithisiweyo, emva koko ucofe u-Susa kwikona ephezulu ngasekunene kwescreen.
Ifestile yokususa iphasiwedi iya kuvela embindini wesikrini, ibonisa imeko yokususa ukhuselo lwegama eligqithisiweyo kwelo candelo kwincwadi yokubhalela. Nje ukuba ukhuselo lwegama eligqithisiweyo lisuswe ngempumelelo, uya kuthunyelwa kwiscreen sasekhaya salencwadana, kwixa elizayo awuzukuyalelwa. ngenisa ipaswedi ukufikelela kwiincwadana zamanqaku kuso nasiphi na isixhobo.
Zaya phi iincwadana zam ze-OneNote?
OneNoteNgo-2016 igcina onke amanqaku akho kwiifayile zakho ze-iincwadi, Ezo zigcinwa ngokuzenzekelayo kwifolda yamaxwebhu kwifolda yazo. Ngenye indlela, zigcinwa kwiIMicrosoftOneDrive. Unako kwakhona ukugcinaiincwadikwindawo ekwabelwana ngayo kwinethiwekhi yakho, okanye naphi na apho ufuna khona.Julayi 17 2019
Kudala ndisebenzisa i-OneNote kwiminyaka embalwa ngoku. Esona sizathu siphambili yayikukucwangciswa ngakumbi. Uyabona, ndihlala ndicinga ngemisebenzi ekufuneka ndiyenzile.
Ndinezimvo zamanqaku amatsha, kufuneka ndibhale phantsi igama leapp elitsha endixelelwe nje ngomnye umntu. Ndiqokelele oku kwiindawo ezahlukeneyo kwaye akukho nanye ehambelana. Uninzi lwazo luye lwanyamalala emngxunyeni omnyama.
Kweli nqaku ndiza kwabelana nawe malunga neengcebiso kunye namacebo e-OneNote kunye nendlela endithanda ukuyisebenzisa ngayo. (Upbeat music) Phambi kokuba siqale, enkosi ngokukhawuleza kwiSkillshare ngokuxhasa inqaku lanamhlanje. ISkillshare liqonga lokufunda elinazo iikhosi ezininzi ezintle.
Kwaye ndinekhonkco elikhethekileyo elikunika iinyanga ezimbini zokufikelela mahala. Ungayifumana kwinkcazo yeli nqaku. Kodwa ndiza kuncokola ngakumbi malunga nayo kude kube sekupheleni ukuze uhlale ubukele.
Ngoku masiqhubeke siye kwiingcebiso zethu. UDavid Allen, umbhali we Ukufumana izinto zenziwe. Incwadi enkulu, ngendlela, kwaye ndiyincoma kakhulu ukuba unomdla.
Uthi unemibono kwaye awunamatheli kuyo. Ke kufuneka sifumane indlela yokurekhoda kunye nokugcina uyilo lwangaphandle ngaphandle ukuze sikwazi ukugxila ekwenzeni ezo zinto zenziwe. Kulapho i-OneNote iza kum.
I-OneNote yincwadi yamanqaku yedijithali, kodwa ingaphezulu kunoko. Ndiqinisekile ukuba uya kuvuma nam ekupheleni kweli nqaku. Masiye kwiingcebiso zam zokuvelisa i-OneNote.
Inombolo yokuqala, Sebenzisa ii-hierarchies ukuzilungiselela. Eyona nto ibalulekileyo kwi-OneNote kukuba unokwenza olwakho uluhlu lolawulo. Kukho amanqanaba amathathu aphambili, elona nqanaba liphezulu yincwadi yokubhalela, kanye njengencwadi yokubhalela ebonakalayo, anokuqulatha amaphepha amaninzi ngamacandelo.
Cinga ngayo njengezahluko encwadini. Kwaye ekugqibeleni kukho amacala. Ezi ziqulathe amanqaku akho okwenyani.
Masithi senza incwadana yokubhalela zonke iiresiphi zakho. Singacofa ekunene kwaye ukhethe iNcwadana eNtsha okanye ucofe. cofa ukongeza incwadana engezantsi.
Amacandelo akule notebook anokuhluka ukuze sikwazi ukwenza icandelo labaqalayo, enye yezifundo eziphambili, enye yezitya zemifuno, enye yeedessert, njalo njalo. Unombono. Ngaphakathi kwamacandelo songeza amaphepha ahlukeneyo eresiphi yokwenyani.
Apha sinendlela yokupheka i-rice mushroom burger yasendle. Sinezithako, imiyalelo kwaye sinokongeza imifanekiso kwaye sinxibelelanise nalapho sifumene khona iresiphi. Ngaphandle kwezi ndlela zokupheka, ndihlala ndibhala iincwadana ezinemibono yamacandelo ngamacandelo ahlukeneyo kuxhomekeke kwinkqubela phambili yakho, njengokucinga, ukuphanda okanye ukubhala.
Kwaye ndinencwadi yokubhalela izinto zobuqu ezinje ngoluhlu lweevenkile, iiholide, njl. Njl. Ukuba ufuna amanqanaba amaninzi olawulo, ungadibanisa amacandelo amaninzi kwiqela lecandelo, ungarhuqa icandelo liye kwiqela. Olunye umaleko onokuthi ulwenze luluhlu olungaphantsi.
Ukuze uzisebenzise kufuneka ube namaphepha amabini ubuncinci kwicandelo elinikiweyo. Ke masithi apha ndinephepha elinamanqaku am entlanganiso avela kwiiNkomfa ze-Excel, ndingenza izinto ezingaphantsi kobudala ngamanqaku ecandelo ngalinye, ke ndineqhekeza elibizwa ngokuba yiSession Notes kwiNkomfa ye-Excel yaseBulgaria kunye namaphepha aphantsi kwintlanganiso nganye. Cofa ukwenza amaphepha aphantsi. Yiya kwiphepha ofuna ukuliguqula libe likhasi eliphantsi kwaye ukhethe Yenza uMxholo ongezantsi.
Iya kuyenza indent isihloko. Unokuba nolwahlulo olwahlukileyo kwiphepha elingaphantsi elithi I-Subpage ye-Subpage. Andikusebenzisi oku rhoqo, kodwa ukuba unamanqaku amaninzi kwaye ufuna ukwakheka kweenkcukacha, zinokuba luncedo kakhulu.
Isishwankathelo, la ngamanqanaba ohlukeneyo olawulo olunokuba nawo. Incwadana yamanqaku, iqela lecandelo, icandelo, iphepha, ezantsi enye, ezantsi ezimbini. Qalisa nje ngesakhiwo esivakalayo kuwe, ungasitshintsha rhoqo okanye usongeze kamva.
Inani lesibini, sebenzisa iithegi ukufumana into oyifunayo. Iimpawu yindlela elungileyo yokuhlela kunye namaqela amanqaku angekho kwincwadi yamanqaku efanayo okanye icandelo kwinqaku lam amanqaku eencwadana zamanqaku, kule meko yombuzo wamandla, apho ndinamanqaku okufunda iziseko ze-M. Masithi le yinto endifuna ukuyenza kungekudala.
Ngokusebenzisa le Nqaku lokulahla ithegi ngasentla, ndingakhetha iithegi ezingagqibekanga ukongeza kwiinowuthsi okanye iinxalenye zeenowuthsi. Ke ndinokuphawula oku ngoKhumbula ixesha elizayo, ke musa ukulibala. Kwenye incwadana yam yophando ndinephepha lokujonga le app yokufunda ibhakhowudi.
tshintsha ubeko lweenote
Ndingayifaka le ncwadana kwithegi efanayo, Ndikukhumbuze kwangolo suku lunye, okt nangona bekwisigqeba esahlukileyo, basadityanisiwe kwaye kulula ukufumana amanqaku eethegi kamva.
Masithi ufuna ukuphonononga onke amanqaku aphawulwe ngokuGcina ixesha elizayo, konke okufuneka ukwenze kukucofa i-icon yokukhangela ngasekhohlo apha, emva koko ucofe ibar yokukhangela kwaye ukhethe kwiithegi ezichazwe apha ngezantsi. Okanye chwetheza nje into oyikhangelayo kwaye ukhethe usuku olifunayo. Uya kufumana uluhlu lwawo onke amanqaku aqulathe le thegi.
Unokusebenzisa iithegi ezisemgangathweni, kodwa ndincoma ukuba wenze eyakho inkqubo yeethegi ngokusebenzisa iithegi zakho zesiko ngokunjalo. Konke okufuneka ukwenze kukucofa i-Yakha ithegi entsha emazantsi apha, kwaye emva koko unokuyinika igama kwaye ukhethe i-icon yeeTag njengokuba unokwenza kwiinguqulelo zangaphambili ze-OneNote. Ezintsha zihlala zongezwa apha ngezantsi, ke sukuya ngaphezulu kwaye ugcine inani leethegi zesiko lilinganiselwe.
Ke sebenzisa iithegi ukwahlula amanqaku. Zininzi izinto ezisetyenziswayo kwiithegi, zisebenzise nje ngokweemfuno zakho. Umzekelo, masithi ufuna ukugcina umkhondo wemisebenzi oyabele amalungu eqela lakho okanye uwasebenzise ukuqaqambisa iinxalenye ezibalulekileyo kumanqaku akho esifundo.
Benza ukuba kube lula ukufumana into oyifunayo, xa uyifuna. Inombolo yesithathu, jot izimvo phantsi kunye namanqaku ancangathi kuyo yonke indawo. Nanini na xa ndiphumile, ndibhala izinto endingafuni kuzilibala ephepheni, emva koko zilahlekile okanye ndichithe ixesha elininzi ndikhangela emqolo, akukho nto iyenye.
Ndifumene amanqaku e-Sticky. I-Sticky Not's zidityaniswe kwi-OneNote usetyenziso kwifowuni. Ke ukuba ndifuna ukubhala into ngokukhawuleza, ndivula i-OneNote kwaye ndicofe amaqhosha, amaNqaku aNcameneyo apha ngezantsi, kwaye ndiqale ukubhala.
Ndingazifumana zonke iiNqaku eziQokelelweyo zangaphambili eziqokelelweyo kanye apha, ke xa ndibuya eofisini kwaye ndifuna ukubona la manqaku, ndiza kuya ngqo kwiNkqubo yeeNqaku eziNcamathelayo. Yinkqubo eyakhelwe ngaphakathi Windows 10. Ukufika apho, cofa iqhosha lokuqala kwaye uchwetheze ukunamathela kwaye uza kubona ukuba kubonakala njani apha.
Uya kuyifumana njengesixhobo esahlukileyo kwikhompyuter yakho okanye kwiLaptop, ngelixa liyinxalenye ye-OneNote app kwifowuni yakho kwaye ilungelelaniswa ngokuzenzekelayo ukuze uhlale unamanqaku akho kunye nawe, nokuba ubuyise phi. Inani lesine, khipha isicatshulwa kwimifanekiso. Enye into ebalulekileyo kukuBonwa ngoBuntu obuBonakalayo, okanye i-OCR, lo mfanekiso uneenzuzo ezimbini ezintle, inombolo yokuqala, unokukopa isicatshulwa kwimifanekiso ukuze ungachwethezi ngesandla.
Umzekelo, ndikope izikrini kumanqaku am. Xa ndicofa kuyo ngokuchanekileyo, ndifumana ukhetho lokukopa isicatshulwa kumfanekiso. Ndingavula iphepha elitsha ndive isicatshulwa esikhutshelwe emfanekisweni.
Isibonelelo sesibini endisisebenzisayo kakhulu kukuba ndikhangele isicatshulwa emfanekisweni. Ndidla ngokuqokelela ulwazi oluninzi kumanqaku endibhala kuwo amanqaku, ndenza nokusikwa kwewebhu kunye nemifanekiso. Xa ndikhangela into ethile kamva, ndisebenzisa umsebenzi wokukhangela.
Useto lwe-microsoft lifecam
Inqaku le-OCR likwakhangela okubhaliweyo kumfanekiso kwaye libonisa lonke ulwazi olufanelekileyo, kubandakanya imifanekiso. Inani lesihlanu, gxila kwi-Immersive Reader. Eyona nto ndiyithandayo ukuyisebenzisa xa ndifuna ukugxila kwisicatshulwa okanye ekufundisiseni ukuphinda ufunde iImersive Reader.
Ngoku idityaniswe nokusetyenziswa okuninzi njengeLizwi, i-Outlook kunye ne-OneNote. Xa ukwiphepha, kwi Jonga ithebhu, ucofa ukuntywila ukufunda kwenza kube lula kwaye kukhawuleze ukufundwa. Ungalutshintsha useto lobungakanani bokubhaliweyo kunye nemixholo yombala ngendlela othanda ngayo.
Kulapho unokutshintsha khona ifonti, kwaye inomdla ziiComic Sans, ifonti enokuthi ingakhange ibonakale inomtsalane kuseto lobuchwephesha, kodwa isebenza kakhulu kubantwana, kwaye i-G-emile yindlela abantwana abafunda ngayo ukubhala esikolweni. Unokusebenzisa oku ukuziqhelanisa nokufunda nabantwana bakho. Unokusebenzisa iqhosha lokudlala elingezantsi kwaye ubhalelwe itekisi ngokuvakalayo.
Funda ngendlela yokuhlalutya ukuba ngaba ipropathi yerenti kufanelekile ukuba ithengwe ngokubala imali yokubuyisa imali. Useto lwelizwi likuvumela ukuba utshintshe isantya selizwi kwaye ukhethe ilizwi lomntu obhinqileyo okanye owesilisa. Simisela itemplate ye-Excel.
Ngokwam, ndisebenzisa i-OneNote. Kodwa mininzi imisebenzi enokuba luncedo kakhulu kuxhomekeke kwiimfuno zakho. Umzekelo, ungazoba iimilo ngesandla emva koko ufake i-inki kubume, kwaye i-OneNote iya kuziguqula ngokuzenzekelayo zibe ziimilo ngemigca ethe tye kwaye iikona ezicocekileyo zinokuguqula ukubhala kwakho kube ngumbhalo ochwetheziweyo, bendikrokrela kuba ndinombhalo owoyikekayo, kodwa iyakwazi nokuguqula eyam, kuqala sebenzisa i-lasso yokukhetha ukukhetha into ofuna ukuyiguqula, emva koko ucofe i-Ink ukuya kwi-Text apha, andilisebenzisi eli nqaku rhoqo kuba ndichwetheza ngokukhawuleza, kodwa kunokuba luncedo ukuba ukhetha bhala amanqaku ngesandla.
Unokusebenzisa i-OneNote kwiingxaki zezibalo. Ungabhala ngesandla i-equation, usebenzise ukhetho lwe-lasso ukuyikhetha, emva koko ucofe iMath. Inki kwiMathematika apha ngasentla ikuvumela ukuba uyiguqulele kwisicatshulwa esibhaliweyo.
Kodwa ayisiyiyo yonke loo nto, ungabuza ngenene, ucofe ukhetho kwaye usombulule ubalo. Kwaye ukuba unomdla, ungabonisa unyana womntwana wakho ukuba angayisombulula njani. Kulungile ukuphola? Musa ukubaxelela ootitshala bakho.
Kukho iinguqulelo ezahlukeneyo ze-OneNote njenge-One okanye i-2013 okanye i-OneNote 2016. Kodwa ingxelo esemthethweni ye-app ngoku ibizwa ngokuba yi-OneNote. Iyafumaneka kwiWindows. Kwaye nakwiMac Plus, isimahla kwaye iyavumelanisa kuzo zonke izixhobo zakho, ke uyabona, kukho iindlela zonke onokuthi usebenzise i-OneNote ukuze usebenze ngakumbi kwaye uvelise.
Ukuba unento oyithandayo, yabelana nathi apha ngezantsi, kwaye ukuba unento entsha yokwabelana ne-OneNote endingakhange ndiyigubungele kweli nqaku, yabelana nangezantsi. Ukuba ufana nam kwaye ufuna ukufezekisa ngaphezulu ngexesha elincinci, ndincoma ukuthatha iikhosi zemveliso kwiSkillshare. ISkillshare ibonelela ngamawaka ezifundo ezikhuthazayo kunye nezihloko, kubandakanya imveliso, ukuzimela, izakhono zobuchwephesha njengezakhono zeofisi, nokunye okuninzi.
Esinye sezifundo zokugqibela endazithathayo eSkillshare yayiyimveliso elula, indlela yokwenza okungakumbi ngokuncinci. Le khosi indenze ndacinga kabini malunga noluhlu lwam lwemihla ngemihla. Ndifumanise ukuba ayisiyongxaki endiyenzileyo ngexesha elithile, kodwa malunga nokuthatha isigqibo sokuba zeziphi izinto ezibalulekileyo, kwaye akukho lula, kuba yonke into ibalulekile ekuqaleni.
Ndiyazixabisa kakhulu izixhobo, ekwabelwana ngazo kule khosi ukundinceda. Ukuba unomdla wokuthatha le khosi okanye amanye amawaka eeklasi kwi-Skillshare, cofa kwikhonkco kwibhokisi yenkcazo engezantsi ukufumana ubulungu beprimiyamu yasimahla yeenyanga ezimbini ekunika ukufikelela okungenamda. Emva kweenyanga ezimbini, umrhumo wonyaka ubiza imali engaphantsi kweedola ezili-10 ngenyanga, nto leyo eyenza ukuba izakhono ezintsha zifikeleleke kakhulu ukuba zibukelwe, kwaye ndiyathemba ukuba eli nqaku likunike izimvo zokusebenzisa i-OneNote ekuphuculeni iinkqubo zakho zemihla ngemihla.
Ukuba uyithandile, yinike isithupha - ufuna ukufunda izakhono ezintsha. Kwaye ndiza kukubona kwinqaku elilandelayo. (umculo omnandi)
Kutheni incwadi yam yokubhalela i-OneNote inyamalala kwikhompyuter yam?
IMicrosoft OneNote idlule kwinani lokuphindaphindwa. Nangona kunjalo, abasebenzisi bayakhalaza malunga nokulahlekelwa ziincwadana, amanqaku, kunye namanqaku ngamanye. Abasebenzisi abaliqela baxela ukulahleka kwamanqaku okanye iincwadana ezipheleleyo ezanyamalala kwikhompyuter yeWindows. Siza kukubonisa ukuba wenzeni xa iincwadana ze-OneNote zitshabalale kwi-Windows PC yakho.
Ziphi iincwadi zamanqaku ezisusiweyo kwi-OneNote?
Vula iphepha lasekhaya le-OneDrive nakwifolda yamaXwebhu okanye yeNcwadi, uya kufumana iincwadi zamanqaku ze-OneNote, amacandelo kunye namanqaku. Amanqaku asusiweyo kunye neencwadana zokubhala zisenokuba kwifolda yokuphinda usebenzise ibinki. Jonga apho kwakhona. Cofa ekunene kwincwadana yokubuyisela izinto ezisusiweyo.
Kutheni amanqaku am kwi-OneNote engabonakali kwifowuni yam?
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, onke amaCandelo kunye namaNqaku kwi-desktop yesicelo se-OneNote sanyamalala. Iincwadana zamanqaku zisekhona kwaye zibonakala ngathi ziyavumelanisa ngenxa yoko ayisiyongxaki yeakhawunti. Amacandelo kunye namaNqaku asafumaneka kwi-OneDrive kunye ne-OneNote app kwifowuni yam. Imkile nje kwiapps yedesktop.
Ngaba kunokwenzeka ukuba ulahle iphepha kwi-OneNote?
Ngamaxesha athile amaphepha e-OneNote okanye iincwadana ezipheleleyo ziyalahleka… Nazi iindawo ezisixhenxe zokuzama ukuzifumana kwakhona. I-OneNote igcina yonke into… yenzelwe njalo ukusukela kusuku lokuqala. Akunakulindeleka ukuba into icinywe ngokwenene. Kusenokwenzeka ukuba iphepha, icandelo okanye incwadi yokubhalela ifihle kude kubunzulu be-OneNote.